Sawirro: Xaliimo Aadan Oo Ka Soo Muuqatay Majalada Sports Illustrated Iyadoo Xiran Burkini - Arimaha Bulshada
Gabadha Soomaaliyeed ee moodalka xijaaban ah Xaliimo Aadan ayaa sannadkii labaad oo isku xiga ka soo muuqatay majalada caanka ah ee Sports Illustrated nuqulkiisa dharka dabaasha iyadoo xiran burkini oo ah dharka dabaasha ee asturan.
Gabadhaan oo 22 sanno jir ah ayaa jabisay rikoodh sannadkii la soo dhaafay markii ay noqotay gabadhii ugu horeysay ee moodal xijaaban ah ee ka soo muuqata nuqulka dharka dabaasha ee majalada caanka ah ee Sports Illustrated, waxayna keentay in si aad ah loo iibsado majalada taasoo sababtay in tifaftiraha majalada MJ Day inuu dalbado inay mar kale sannadkan sawiro u gasho majalada.
“Waan ku faanayaa inaan sannadkii labaad soo laabtay” ayuu Xaliimo ku soo qortay Instagram iyadoo majalada haatan si rasmi loo iibinayo. “Inay sawiro iga qaado Kate Powers waxay aheyd riyadeyda. Waad mahadsan tahay MJ Day iyo dhamaan gabdhaha walaalahey ah ee Sports Illustrated.”
Sawiro dhow ah oo la baahiyay shalay iyo maanta ayaa muujinaya Halima oo xayaysiineysa dharka dabaasha iyadoo asturan islamarkaana aan u dhaweyn dumarka qaawan ee badanaa ka soo muuqda majalada.
Sawirkada la baahiyay waxay ku xayaysiineysaa Burkini ay sameysay shirkada Tommy Hilfiger oo midabkeeda uu basale yahay islamarkaana uu la socdo suun dhexda lagu xirto iyo xijaabkii tinta u daboolayay.
Waxay sidoo kale xayaysiin u sameysay shirkada reer Australia ee soo saarta dharka dabaasha ee Myra Swim.
Xaliima Aadan ayaa bilowday waayaheeda moodalnimo ka dib markii ay u tartantay tartanka quurxda Minnesota ee dalka Mareykanka sannadkii 2016 iyadoo aheyd gabadhii ugu horeysay tartanka ee soo xira dhar asturan.